Vashanyi vebhola reAsia Vechidiki Nhau dzeMwana uye Untold Biography Chokwadi
musha ASIAN FOOTBALL STORI
Vafambi veNyanzvi dzeAsia vane vese vane Nhau dzeChidiki. LifeBogger inokuudza nyaya idzi, iyo ine yakawanda yenguva dzisingakanganwiki dzinonakidza uye kubata.
Sei Nyaya dzeChidiki dzeVenhabvu vekuAsia?
Munguva pfupi yapfuura, kutenderera gore ra 2016, takaona hombe yezivo iyo iripo pawebhu. Ndiyo imwe inoenderana nekushaikwa kwezvakakwana zvemukati zveAsia Footballeers.
Kuvhara iyi geji, LifeBogger yakafunga kuumba iyo Asia Chikamu, nechinangwa chekuendesa Nhau dzeVechidiki uye Biography Nhau dzePolorballers dzeKondinendi.
Nezve yedu yeAsia Nhabvu Yenyika
LifeBogger zvinyorwa zvinochengetedza zvine musoro kuyerera kune ese enhau. Aya anotevera maiti anokuita kuti iwe unzwisise zviri nani zveAsia yedu zvemukati.
Kutanga uye pamberi pezvese, tinounza iwe nyaya dzehudiki dzevashandi vebhola veAsia, kutanga nenguva yekuzvarwa kwavo, kune kwavo kwekutanga hupenyu.
Isu tinokuunzira zvakare ruzivo nezve kumashure kweMhuri uye mabviro / midzi yeAsia Bhora. Zvakare, vabereki vavo (vanababa naamai).
Yetatu, tinokuudza zviitiko zvavo zveHupenyu hwepakutanga uye izvo zviitiko (zvakanaka kana zvakaipa) zvakaita kuti vazive kudana kwavo kwenhabvu.
Iyo nyaya inoenderera nezviitiko mumakore avo ekutanga ebasa.
Inotevera yedu nzira yekuFame Nhau. Pano, isu tinotsanangura izvo veAsia footballeers kuti vabudirire.
Yedu Rise to Fame Nhau inoenderera ichitsanangura yavo Mabudiriro Nhau uye ikozvino mukurumbira chimiro.
Isu tinobva taenda kumberi kuti tikugadzirisei neNhau dzeRudo rwavo (vasikana & vakadzi).
Tevere, izvo zvokwadi nezve Hupenyu hwevanhu veAsia Bhora.
Boka redu rinobva raita kuti uzive nenhengo dzemhuri dzavo, pamwe nehukama nenhengo dzemhuri nehama.
Inotevera ndeyeLifestyle Chokwadi, Networth uye Mubayiro.
Chekupedzisira, tinokuunzira iwe Untold Chokwadi iwe wausina kumboziva kuti chiripo nezveAsia Bhora.
Muchidimbu, isu tinotenda kuti Chikamu ichi chingabatsira mabhiriji pakadzika padanho rekuve neruzivo rwakakwana nezveAsia Bhora Nyaya dzeUdiki uye Biography Chokwadi. Nekutenda, vateveri veNhabvu vanogona ikozvino kutarisa mutambo uye panguva imwechete, kuverenga nyaya dzinoshamisa nezvevatambi vavanotsigira.
LifeBogger inoshingairira kuti ive nekurongeka uye nekuita zvakanaka munzira yayo inowirirana yekuburitsa mabhuku ebhora. Ndapota Taura nesu kana iwe ukaona chero chinhu chisinga tarise chero chechinyorwa chedu.
Zvino pano panouya yedu Asia Nhau dzeNhau.
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Chivabvu 13, 2020
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Ndira 24, 2019 0
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 22, 2018 0
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 12, 2020 0
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 23, 2018 0
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 23, 2018 0
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Zvita 1, 2019 0
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Zvita 18, 2017 0
Roman Pavlyuchenko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Zvita 18, 2017 2